Buru ndi ozo n’egwuregwu PvP na Star Wars: Force Arena | Gam akporosis
Star Wars: Foce Arena bụ MOBA ga-eme ka ị nwee mmetụta n'akụkụ ọkụ nke ike
MOBAs bụ ụdị na ịrị elu n'ihi eSports na nnukwu LoL nke jisiri ike bulie ụdị egwuregwu a ka ọ bụrụ kpakpando. You nweghị ike ịghọta asọmpi eSports nke ị na-enweghị ike ịchọta MOBA nke meghere oghere na asọmpi maka ọtụtụ ụlọ ọrụ iji gbalịa bụrụ ọgazị ọla edo nke ụdị ahụ na egwuregwu egwuregwu. N'oge ahụ, ọ dị ka ọ nweghị onye na-ewere ọnọdụ dị ukwuu, mana n'ime oge, mmadụ nwere ike ịba mkpa nke ọha na eze na bụrụ onye LoL nke MOBAs site na ngwaọrụ mkpanaaka.
NetMarble na-aga ịnwale ya Star Wars: Force Arena na nke ahụ ezigbo PvP na ụdị MOBA nke egwu nke ukwuu na nke na-achịkọta eluigwe na ala nke George Lucas chepụtara na onye rere Disney na nso nso a. Ga-abụ akụkụ nke eluigwe na ala iji gosi onwe gị ma n'akụkụ ọkụ na ọchịchịrị nke ike ahụ na usoro ihe odide niile nke kpochapụrụ saga a ka ọ dị taa. You nwere ike ịhọrọ n'etiti ịbụ onye so na nnupụisi ma ọ bụ ịbụ alaeze ukwu, ọ dabere na gị. Ozugbo i kpebiri, ị ga-amalite ịmepụta ndị otu ndị agha gị ka ha chee ndị ọzọ egwu.
1 A Star Wars na ìhè n'akụkụ na ọchịchịrị n'akụkụ
2 Egwuregwu lekwasịrị anya na PvP multiplayer
A Star Wars na ìhè n'akụkụ na ọchịchịrị n'akụkụ
Ọ na-enwe ekele na ha na-ekwe ka anyị họrọ akụkụ nke mmadụ chọrọ, ebe ọ bụ na Darth Vader na ndị ọzọ na-ede ihe odide n'akụkụ a, dịkwa mma ma ọ bụrụ na mmadụ ejiri ihe ọma na ndụ na-agwụ ike. A ụdị dị iche iche Site na fim ị ga-ahụ onwe gị na nkuzi ị ga - alụ ọgụ na Luk Skywalker nke chere Darth Vader ihu ma ọ bụ eze ukwu n’onwe ya.
You ga-enwe otu kaadị nke i nwere ike chepụta ihe egwuregwu gi ga-abu. Dị ka Clash Royale ma ọ bụ ndị ọzọ, ị ga-enweta nkà dị iche iche na ọgụ na kaadị ndị ahụ. Ndị a kaadị na-enwetara mgbe ọ bụla agha na ike na-kwalite ka mma nwere nke gị oche ma ọ bụ squad.
Ọgụ na-eduga n'ọtụtụ egwuregwu MOBA. Ga-enwe ike ịhazi kaadị nke kaadị site na itinye duos dị egwu dịka Han Solo na Chewbacca. Otu n'ime ihe odide ahụ ga-enye dị iche iche ike pụrụ iche nye ndị agha na-eso ha.
Egwuregwu lekwasịrị anya na PvP multiplayer
Star Wars: Force Arena bụ ọtụtụ elekwasị anya na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmụta ihe niile banyere egwuregwu na nkuzi na mmalite. Ga-achọpụta ọkwa dị iche iche nke ndị agha, ị ga - emesị nwee ike ihu egwuregwu n'etiti oge n'etiti ndị egwuregwu abụọ ma ọ bụ anọ (1v1 na 2v2).
Karịa Akara akara ngosi 65 na-echere gị Star Wars n'etiti ndị bụkwa ụgbọ ala ma ọ bụ ndị ahụ Luke Skywalker, Darth Vader na Ezra Bridger.- Ike ndị pụrụ iche nwekwara mwakpo ikuku site na nku X, yabụ ị ga-ahụ onwe gị ka ọgụ ndị ahụ na-agbasi ike na ihe niile dị oke ọnụ na mgbawa , eriri laser na njikwa ike.
Have ga-achịkọta kaadị ndị kachasị mma iji mepụta oche ndị kachasị mma, ebe ọ bụ na ha ga-etinye gị n'ọnọdụ dị mkpa na agha, ọ bụ ezie na ị nọ n'oge, ị ga-elebara anya ịmara otu esi etinye kaadị ndị ahụ ma jiri ha nke ọma. Ị nwere ike isonye na ihe omume ma merie ihe nrite, ihe ndi ozo na ihe odide puru iche.
Star Wars: Force Arena dị n'efu site na Playlọ Ahịa Google na micropayments ndị doro anya. Egwuregwu vidio iji nwee obi ụtọ na Star Wars na ihe ndị ọzọ karịa ugbu a ka ahapụla ọhụụ ọhụrụ na ekeresimesi ikpeazụ.
Will ga-ahụ otu akwa oru Ma ọ bụrụ na ị nwere smartphone kwesịrị ekwesị, ị ga-enwe ọ charactersụ na akụkọ ifo ndị ahụ niile na ike ha pụrụ iche. Egwuregwu na-enwekwa obi ụtọ maka map ndị e mepụtara na nke ị ga-amata iji merie ndị iro gị. Enwere ike ịta ụta na ozugbo anyị na-eji Darth Vader ma ọ bụ Luke Skywalker.
Ogige Star Wars Force Arena
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Star Wars: Foce Arena bụ MOBA ga-eme ka ị nwee mmetụta n'akụkụ ọkụ nke ike
Dandy Dungeon bụ RPG kachasị oke oke n'ike mmụọ nsọ nke Don Quixote de la Mancha
Android Pay v1.14 ga-agbakwunye onyinye, Kupọns na nkwalite usoro iguzosi ike n'ihe